Faa'iidada iyo faa'iido darrada, taas oo loogu talagalay in Xintai tii pachinko
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Faa'iidada iyo faa'iido darrada, taas oo loogu talagalay in Xintai tii pachinko
In qowladda pachinko ah, iwm hore ee xarunta, waxa kale oo aad ku cayaaraa soo bandhigay isla markiiba sii daayo ka dib markii Xintai ah. In, faa'iidooyinka iyo khasaaraha dooneysa Xintai noocan oo kale ah, waxaan eegi doonaa waxa qayb ka mid ah. First of dhan, waa lacagta ah, dhawr maalmood ah hordhaca Xintai, waa in ay tahay sare u muuqdaan in ay noqon dhidib-Horukon oo ay ku jiraan set macaan oo goobta joogay ee bilowga. Inkastoo
Xintai, waxaana la sidoo kale soo bandhigay in dukaanka deriska ah model ah isla waqti isku mid ah. Xintai waa, dabcan maxaa yeelay, markaan soo saarka xilliyeedka in, dad doonaya in ay ku garaacdo inta badan waa. Si kastaba ha ahaatee, waa dhow to've loo diiday macaamiisha sida, ma aynu lihin wax inay soo bandhigto dhib badan. Markaas, si jirnay dhowr maalmood laga bilaabo maalinta koowaad, waxaan inta badan dukaan pachinko si xawaaraha wareeg waa kasban.
sida marka laga reebo, haddii aadan ku garaacday karaa oo keliya at dukaanka hordhaca meesha ugu sareysa, waxaa laga yaabaa in goobaha dib u soo kabashada, sababtoo ah tallaalka ayaa sidoo kale ku hayso dadka ururin.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay weli sida arrimuhu aasaasiga ah ee ciyaarta in Xintai, waxaa soo bandhigid saddex maalmood ah waxaa jira dad badan oo ujeedadoodu tahay indhaha.
iyo khasaaraha, laakiin Xintai waa hal dhibic in ay adag tahay in la noqdo miiska lacag la'aan ah, waa in ay u badan tahay in la soo kabsaday ku saabsan 3 maalmood ka dib. Xintai First, soo bandhigay maalintii ugu horraysay sidoo kale waa bakhtiyaa, laga bilaabo maalinta labaad, sidoo kale waxaa inta badan si ay u noqdaan miiska buuxda subaxdii. Intaa waxaa dheer, in ay dhacdo lagu daydo oo caan ah sida, had iyo jeer ama dadka qaar ka mid ah sugitaanka free, haddii ay jiraan waa heshay a, waxaa waxa uu noqon lahaa yar tahay in ay noqon miiska lacag la'aan ah. Haddii
hubaal ka dhacay, waa in aad ma aha oo kaliya in hal subax tagaan.
waana sixitaanka dhidib ah iyo goob Horukon, Xintai si of Barker, meel saddex maalmood ka hordhaca maalinteedii kowaad, laakiin waxaan furo badan sixitaanka caadi ah, tan iyo maalintii 4 booska, si geli lahaa hab dib u soo kabashada , waxaad leedahay wuxoogaa adag ah.
Tani waa Xintai ka mid ah faa'iidooyinka iyo khasaaraha celcelis ahaan qowladda pachinko ah, in qowladda pachinko laga cabsado, maalinteedii kowaad ayaa ka sal-dhigida Xintai adkayn, sidoo kale waxaa jira dukaan yimid ururinta. Of Xintai waa sida qowladda pachinko ah, daacad ah Faa'iidooyinka Waxaan qabaa waxaa jira in yar.
ka hadlayay xoog, waa ku saabsan xaqiiqada ah in weerar ee model ugu dambeeyay. In dib u soo kabashada hal maalin ka, faa'iidooyinka Xintai baabi'i doontaa oo dhan. Haddii ujeedadu of
ku Xintai, tag garaacday hordhaca ah maalintii ugu horraysay la mudnaan, ka dibna laba maalmood Haddii aad tahay sixitaanka dhidib ah iyo goob Horukon, waxaan u malaynayaa in ay noqon doonto laga yaabaa in isha si xoog.
lagu daydo ugu dambeeyay, laakiin waxaad u baahan doontaa in la garaaco ka badan haddii lagu daydo oo caan ah, haddii ul inay ku guuleystaan, Xintai Waxaan qabaa adag tahay in la beddelo. Fiiri arrimuhu Xintai waqtiga of sal-dhigida ee
si fiican u socda tii pachinko, ama faa'iidooyinka dukaamo badan oo ka mid ah in Xintai, ama isku day in aad hit ka Go'aanso haddii khasaaraha inta badan dukaanka ka.